Accueil > Gazetin'ny nosy > Ambatolampy: Nankaiza ny vatosoa tao amin’ilay fiara?
Ambatolampy: Nankaiza ny vatosoa tao amin’ilay fiara?
Tamin’ny alakamisy faha 09 novambra 2017 dia niharan-doza tao Ambatolampy ny fiarakodia nitondra ny “magistrat” na mpitsara iray. Nifandona tamin’ny fiarakodia lehibe iray ity fiaran’ny mpitsara ity ka maty tsy tra-drano tamin’izany izy, ary maty koa ny olona roa hafa tao amin’ilay fiarabe.
PRMP na olona mpiasam-panjakana ambony miandraikitra ny tolotrasa ao amin’ny ministeran’ny Fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa ity maty ity. Tao anatin’ny adin’ny enina no nisokirana ny fatin’ny olona ireo tao anaty fiara. Midika izany fa mafy ny fifandonana satria potika tanteraka ireto fiara roa ireto.
Fantatra fa nisy volabe tao amin’ny fiara nentin’ilay mpitsara na “magistrat”. Maro no nahita izany ny olona nanatrika ny loza. Araka ny fantatra dia tafaverina any amin’ny fianakavian’ny maty ny vola. Misy koa nefa vatosoa izay voalaza fa tao amin’ny fiara nitondra ity olona ambony ity. Hatramin’izao dia mbola tsy hita izay nanjavonan’izany. Raha ny loharanom-baovao hatrany dia nidina tany an-toerana ny miaramila avy amin’ny Emmo/reg avy aty Antananarivo nanao fanadihadiana mahakasika ity raharaha nahafaty ity olona ambony ity. Andrasana ny vokatr’izany mba hahalalana ny marina rehetra amin’ity raharaha ity.
Fampielezana tsaho: Voasambotra ilay nampisahotaka an’Antananarivo
Andro vitsy aty aoriana ihany dia voasambotry ny pôlisy ilay tompon’antoka tamin’ny fampielezana tsaho izay nampisahotaka ny ray aman-drenin’ny mpianatra teto Andrenivohitra sy ny manodidina, ny alakamisy 9 novambra lasa teo. Tovolahy vao 24 taona monja ity voasambotra ity ary raha ny fanazavana nomen’ny mpitandro filaminana dia niaiky ity farany fa izy namoaka tamin’ny tambazotran-tserasera fa misy ny olona milaza ho mpiasan’ny ministeran’ny Fahasalamana miaraka amin’ny mpitandro filaminana no mitety sekoly ary manao vaksiny an’ireo ankizy mpianatra ahiana ho voan’ny pesta. Niaiky ity tovolahy ity fa noforoniny izany vaovao izany mba hifantohan’ny olona any aminy. Omaly ihany moa dia nampidirina vonjimaika eny Antanimora ny voapanga, miandry ny fotoam-pitsarana azy. Ny mpitandro filaminana moa dia nampitandrina an’ireo izay mbola minia manaparitaka vaovao na tsaho mampisavorovoro ny saim-bahoaka ao anatin‘ireny tambazotran-tserasera ireny.